Pasi rose kune vanyori gumi | Zvazvino Zvinyorwa
Pasi rose kune gumi vanyori
Alberto Makumbo | | Vanyori, Literature
Zvinyorwa zviri zvepasirese, uye nekudaro tsika nemunyori wese pasi pano vakundwa nemaonero avo zvakakonzera kubarwa kwebasa rakakura. Iko kwechokwadi kwemashiripiti kweLatin America, chiJapan hermeticism kana chiFrench nihilism ndizvo zvimwe zvezvimisikidzo zvinoumba izvi kutenderera pasirese mune gumi vanyori.
6 Miguel Delibes chinobata mufananidzo
Semwana mudiki, Murakami akaonekwa kukwezvwa netsika dzekumadokeroKuvapo kwejazi raakateerera mukukura kwake, matanho epasirese aakabatanidza neyekuzvarwa kwake kuJapan kana kudziya kukuru kunozadza mabasa ake kuri kuitika mumanyoreri ake. Mushure mekubudirira kwenhau yake Tokyo blues, Murakami akatamira kuEurope kuti arambe achipa hupenyu kubhaibheri rakagadzirwa nemazita akadai se Kafka pamhenderekedzo o 1Q84 ichisimbisa mamiriro avo se munyori ane mukurumbira wechiJapan pasi rose uye zvakare, mukwikwidzi wekusingaperi weNobel Prize izvo zvinomudzivisa nguva dzose.
Iye anofara indian mabhuku Iyo ine inozivikanwa mafomu mazhinji: kubva kune epic epic yeRamayana kuenda kunhetembo dzaTagore, ichipfuura nechizvarwa chevanyori vakakwanisa kuendesa mashiripiti enyika yekari kuenda kumatambudziko epasi. Mumwe weava vanyori hapana mubvunzo kuti Salman Rushdie, uyo anoziva nzira yekuruka nzira pakati peEurope neAsia uko mashiripiti uye kushoropodza kwakagara kuchigara mukati memabhuku ake. Kutsoropodza uko, mune iyo nyaya ye Ndima dzaSatani, rimwe remabasa ake makuru, yaive mhosva yekutambudzwa nevanyanyisi veIran vasina kufarira chiono chaRushdie chemutungamiri wavo wemweya muma80, mubairo waidiwa nemusoro wake uchiri kushanda.
Kunamatwa na Friedrich Nietzsche, uyo panguva iyoyo akauya kuzotaura nezvake kuti yaive "imwe yenjodzi dzinofadza dzehupenyu hwake", Dostoevsky aive mumwe wevanyori vakakurumbira veTsarist Russia, nzvimbo yaakaongorora kuburikidza nemabasa ake kubva mune zvematongerwo enyika kana Zvemagariro. . Kunyangwe aidzidzira kuve mainjiniya, kufarira kwake mabhuku kwaizouya apedza kudzidza, zvichizoguma nebhuku rebhuku iro basa rake rakakurumbira kwazvo rinomira, Mhosva uye Kurangwa, nzira yehurombo uye chishuwo chekubudirira mune hofori yeRussia iyo nanhasi inoramba iri imwe yenyika dzisina kuenzana pasi rose.
Pakati peVictorian England, Dickens akava mumwe we vanyori vezvinyorwa zvepasirese. Munyori ane mabasa ake ekutanga akatanga kuburitswa muzvikamu mumagazini akasiyana, izvo zvakaguma mukutarisira kukuru kune vaverengi vasina mari yakakwana yekutenga mabhuku. Pfuti yekutanga yakapihwa neThe Posthumous Papers yeCickwick Club muna 1837, ichiteverwa nemamwe mabasa echiratidzo akadai. Oliver tendeuka o David Copperfield, iyo yakashandurwa kuita firimu uye theatre pane akati wandei.
Akazvarwa mumhuri yevaFrance vanogara muAlgeria, Albert Camus, godfather wehupenyu huripo uko kushoropodzwa kwakamubatanidza iye muhupenyu hwake hwese, aiziva semumwewo munhu wekuzvipira kurondedzera matambudziko ezana ramakumi maviri emakore kuburikidza nenyaya senge Kunze kwenyika o Denda. Novels umo Camus anoita zvinongedzo zvenguva dzose mukusaziva kwemunhu pamusoro pake nenyika inomukomberedza, achitsvaga kunzwa kwekusurukirwa kwakabatana nenguva yekuchinja nguva dzose uye shanduko. Iri basa rakaonekwa nemunyori rakakomborerwa ne Mubayiro waNobel uyo waakapihwa kwaari muna 1957.
Miguel Delibes chinobata mufananidzo
Nhengo yeReal Academia Españaola Kusvika parufu rwake muna 2010, Miguel Delibes anga ari mumwe wevanyori vakakurumbira vehondo yapashure pehondo yeSpain, vachinyora nzanga mukuchinja kungogara kuripo. Shanduko inotora mamiriro mune enganonyorwa senge Mumvuri wecypress wakareba (Nadal Mubairo muna 1947) kana Maawa mashanu naMario, monologue nemukadzi pamubhedha wemubhedha wemurume wake achangofa uyo chinova chirevo chechinangwa nezveicho chaicho chenguva. Pasina kupokana, mumwe wevanyori vakuru venyika yedu.
Kunyangwe iyo nyika yezvinyorwa yakanga isinganzwisise vanyori vechikadzi kusvika nguva isiri yapfuura, muAfrica mamiriro acho akange akaipisisa. Pane kondinendi umo kuratidza chirevo chetsika kwakavhoterwa nemasimba ekune dzimwe nyika kwemazana emakore, Chimamanda Ngozi Adichie anobuda nezwi iro nyika inoda nekuda kwekushanda kwake nesimba kuti ataure nezve African diaspora, uye kunyanya kubva kunharaunda yekuNigeria, kuburikidza nyaya dzevakadzi nevatorwa zvinonakidza. Americaanah, Ruva repepuru kana kuunganidzwa kwenyaya Chinhu chakakomberedza mutsipa wako iyi ndeimwe yemimwe mienzaniso yekufurira kwakaitwa naAdichie munyika mumakore achangopfuura.
Muna 1967, iyo nyorwa yenoverenge yakadaidzwa Makore zana okusurukirwa yakasvika ichibva kuMexico ichienda kuArgentina munyori wayo asingakwanise kuona mabudiro ebhuku mushure mekuburitswa kwayo. Radiography yekondinendi yeLatin America iyo Gabo yakatora kuburikidza neguta reColombia reMacondo uye saga yeBuendía. Makore Mazana Ekusurukirwa haana kungova mureza weiyo inozivikanwa se «ChiLatin American boom«, Asi yaizosimbisa chimiro chaGarcía Márquez seimwe yeiyo vanyori vane simba kwazvo zvenguva yake.
Batanidza pakati ezvinyorwa vanguards eLatin America neEurope, Argentine Cortázar yakava chiso chisinganyanye kutsarukana cheLatin American boom. Munyori asinganyunyuti mazwi aiziva kuzvigadzirisazve sevamwe vashoma nekupa nyika iro iro basa rakadaidzwa Rayuela izvo zvaizoshandura nyika yezvinyorwa zvachose.
Mabhuku mashoma ane simba senge Uraya Mockingbird, inoverengeka nemunyori Harper Lee iyo mushure mekuburitswa kwayo muna 1960 yaive dart yetsika yenyika yeAmerica uko machismo kana rusaruraganda zvaive zvichingopfuura kupfuura latent. Munyori aiziva kutsanangura musimboti werudzi rweYankee kuburikidza neruzivo rwake uye mavara aimiririra anodiwa magariro archetypes munyika isina kuenzana. Akanyengerwa mu2016, munyori akasiyira gwaro rekutanga rebhuku rake rine mukurumbira, Enda unonyorera murindi, achisimbisa ukuru hwebasa rake rese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Pasi rose kune gumi vanyori
Akawana gumi nematanhatu mavhesi matsva eUlysses uye ake Odyssey, naHomer.
Mabhuku ane magumo akanakisa